Mikel Arteta Oo Go'aansaday Inuu Arsenal Ka Fasaxo Shan Ciyaartoy Iyo Magacyadooda - Gool24.Net
Mikel Arteta Oo Go’aansaday Inuu Arsenal Ka Fasaxo Shan Ciyaartoy Iyo Magacyadooda
Tababare Mikel Arteta ayaa go’aan ka qaatay shan ciyaartoy oo ka tirsan, kuwaas oo uu xagaaga marka uu furmo suuqa iibka ciyaartoyga uu ka diri doono naadigiisa.
Mikel Arteta waxa uu ku hawlan yahay inuu dhiso qorshaha uu dib ugu dhisayo Arsenal, si ay sannadka dambe ugu tartami karto horyaalka Premier League, isla markaana ugu soo laabato kaalinteedii joogtada ahayd ee ay ku lahayd tartanka Champions League.
Xilligan uu xanuunka Coronavirus dunida dhibka ku hayo, tababare Mikel Arteta oo kasoo ladnaaday cudurkan oo uu ka mid noqday dadkii ugu horreeyey ee gudaha Ingiriiska uu ku dhacay, waxa uu kasii fikirayaa ciyaartoyda uu keeni doono Emirates ee hawl-galkooda uu bilaabi doono horraanta bisha June, iyadoo ka hor inta aanu ciyaartooyo cusub keenin uu dhimi doono tirada ciyaartoyda ka diiwaangashan Arsenal waqtigan.
Mikel Arteta ayaa la sheegay inuu go’aansaday inuu shan ciyaartoy ka diro kooxdiisa, isl amarkaana uu laba laacib oo haddaba amaah kula jooga uu heshiisyadooda u beddelo mid rasmi ah.
Pablo Mari oo amaah uu kaga soo qaatay kooxda reer Brazil ee Flamengo ayuu Arteta ka dhigi doonaa saxeexiisa ugu horreeya ee rasmiga ah, waxaanu ku xigsiin doonaa Cedric Soares, kuwaas oo boosaska kala bixi doona Shkodran Mustafi iyo Sokratis Papastathopoulos oo noqon doona ciyaartoyda laga fasaxayo Emirates.
Difaaca bidix ee Saed Kolasinac ayaa ka bixi doona, waxaana booskiisa buuxin doona Kieran Tierny iyo Bukayo Saka oo Arteta uu ku tartansiin doono halkaas.
Labada xiddig ee kale ee uu Arteta go’aanka ka gaadhay ayaan xilligan joogin Emirates oo amaah ku maqan, waana Mohamed Elneny oo u ciyaara kooxda reer Turkey ee Besiktas iyo Henrikh Mkhitaryan oo AS Roma ka tirsan.